ဒူးတွေချောင် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ကျွန်တော်က အားရင်အားသလို ရွားဦးဘုန်းကြီးကျောင်းက ခရေပင်ကြီးကို ဝန်းရံထားတဲ့ ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်မှာ သွားပြီးနေလေ့ရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ နိမ့်မြင့်မရွေး လက်ခံပေးနေတဲ့ နေရာဆိုတော့ စဏ္ဍာလ လို့ခေါ်တဲ့တောင်းစားတဲ့ သူတွေ လာရင်လည်း အဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လာရောက်တည်းခိုလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်က ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာနေရင် သူတို့က ကွပ်ပျစ်နားက ဇရပ်ပေါ်မှာနေကြပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်နေကြတယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော်ရယ် သူငယ်ချင်းသုံးလေးယောက်ရယ် ကွပ်ပျစ်ပေါ်ထိုင်နေတုန်းမှာပဲ
ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ စဏ္ဍာလကြီး တစ်ယောက်က ဆေးလိပ် လာတောင်းတယ်။
”မပါဘူး ဗျာ ပါလည်း မတိုက်ဘူး”
အသံမျိုးစုံနဲ့အတူ နှာခေါင်းရှုံ့သူကရှုံ့ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ထထွက်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီး သနားသွားတာနဲ့
”အဲဒါဆို ခဏစောင့် ကျွန်တော့်မှာတော့ မပါသေးဘူး ဝယ်လာပေးမယ်”
“ပိုက်ဆံယူသွားလေ…ဦးတို့ဆိုရင် ဆိုင်တွေက မရောင်းချင်သလို နှင်ထုတ်ကြတယ် အဲဒါကြောင့် မဝယ်ရဲလို့ပါ”
“ရပါတယ် ကျွန်တော် ဝယ်တိုက်ပါ့မယ်”
ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်ရောက်တော့ ရွှေရောင် ဒူးယားဘူးလေးတစ်ဘူး ဝယ်တော့ ဆိုင်ကအစ်မကြီးက
”ဟဲ့ကောင်လေး နင်သောက်မလို့ဆို မရောင်းဘူးနော် အိမ်တိုင်လိုက်မယ်”
လို့ မနည်းပြောပြီး ဝယ်လာခဲ့ရပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြန်ရောက်တော့ စဏ္ဍာလကြီးကိုဆေးလိပ်ဘူးပေးလိုက်တာ အငမ်းမရ ဖွင့်သောက်ပါတော့တယ်။
လို့ပြောတော့ ရပါတယ် ပြောပြီး ကွပ်ပျစ်ပေါ်ဆက်လှဲနေခဲ့တာ သူလည်းဇရပ်ဘက်က သူ့အဖော်တွေဆီသွားပြီး ဆေးလိပ်သွားဖွာနေချည်ပါတော့တယ်။
စဏ္ဍာလအဖွဲမပြန်မချင်းပဲ တစ်နေ့ကို ဆေးလိပ်တစ်ဗူး ကျွန်တော်ပေးလှူနေခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက မင်းမို့လို့ကွာ အဖက်လုပ်ပြီးပေးနေတယ်ပြောတော့ ကျွန်တော်က
”သနားလို့ပါကွာ သူတို့မှာ ပိုက်ဆံပေးဝယ်လည်း ဆိုင်က မတူသလို မတန်သလိုနဲ့မို့ပါ”
လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့အဖွဲ့ပြန်သွားပြီး ကျွန်တော်လည်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားခဲပါတော့တယ်။ တစ်ရက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော်ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်နေတုန်း “ညီလေး” လို့ ခေါ်သံကြားလိုက်ပါတယ်။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တိုက်နေကျ စဏ္ဍာလကြီး
“ဦးလေး ရောက်လာပြန်ပြီလား ဆေးလိပ် သောက်ချင်လို့လား”
လို့ ကျွန်တော်မေးတော့ သူက…….
“ဦးလေးတို့ အဖွဲ့က တစ်ခြားမြို့နယ်အထိသွားကြမှာ ငါ့ညီရှိမလားလို့ ဒီကိုခဏဝင်ကြည့်တာ ဦးလေးက”
“ဦးလေးပြောတာကို ယုံယုံကြည်ကြည့်နဲ့လုပ်ရင် ငါ့ညီအတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်”
“ဘာကိုလဲ ဦးလေး ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး”
သူက သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထောင်အရှည်ကြီးထဲကနေပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုနှိုက်ယူလိုက်ပါတယ်။ ရှုံ့အိတ်လေးတစ်ခုပါ ချည်ထားတဲ့ကြိုးကိုဖြည်ပြီးတော့ အိတ်ထဲက ပစ္စည်းလေးကိုထုတ်လိုက်တော့ နက်ပြောင်နေတဲ့ ကလေးပေါက်စအရုပ်ကလေးတစ်ရုပ် သူက
“ငါ့ညီဘဝမှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ထဲကနေ တပ်မက်လာခဲ့ရင် ဒီအရုပ်လေးကို လက်နဲ့ကိုင် ဖွဖွလေးပွတ်ပြီး အဲဒီမိန်းကလေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိအောင်သွား ပြီးတော့ အရုပ်လေးကို ငါ့သား အဲဒါ မင်းအမေပဲ အဖေနဲ့အမေ အတူနေဖို့ ငါ့သားကြိုးစားပေးလို့ ပြော… အဲဒါဆို အဲဒီမိန်းကလေးက မင်းစိတ်ထဲကူးနေတဲ့နေရာကို ရောက်အောင် လာလိမ့်မယ်”
“ငါ့ညီကို ဦးလေးပြောခဲ့သလိုပဲ ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးရင် မှန်မှန်ကန်ကန် အကျိုးရှိလိမ့်မယ် ဒီအလာမှာ ငါ့ညီကို ဒီကွပ်ပျစ်မှာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်တွေ့ရင် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ပေးမယ် မတွေ့ရင်မပေးဘူးဆိုပြီး အဓိဌာန်နဲ့လာတာပဲ ငါ့ညီကိုတန်းတွေ့တာ ကဲပါကွာ ဦးပြောတာမှတ်ထား ယုံကြည့်ရင် အကျိုးပြုလိမ့်မယ်”
ပြောပြီး ကျွန်တော့်လက်ထဲအိတ်လေးလိုက်ထည့်ပေးပြီး သူထွက်သွားပါတယ်။ ခြေလှမ်း လေးငါးလှမ်းအရောက် ပြန်လှည့်ပြီးတော့
“ငါ့ညီ… သူ့ကို နို့ဆီပဲဖြစ်ဖြစ် နွားနို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်း ခွက်သေးသေးလေးနဲ့ သူ့ဘေးချပေး”
ပြောပြီးဆက်ထွက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှုံ့အိတ်လေးကိုင်ပြီး ငေးကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အရုပ်ကလေးကို မေမေတို့စားခဲ့တဲ့ စတုမဓူ ပုလင်းခွံလေးထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ယုံသလိုမယုံသလိုပေမယ့် ဟိုဦးလေးကြီးမှာသွားသလို သူ့ကိုကျွေးဖို့ရာ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ဆိုင်က နို့ဆီတစ်ဗူးသွားဝယ်လိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်ရောက်တော့ “နို့ဆီ တစ်ဗူးပေးပါ” လို့ပြောလိုက်တယ်။ အရုပ်ကလေး လက်ထဲရောက်ပြီးမှသတိထားမိတာ အဲဒီအိမ်ဆိုင်က ညီအစ်မသုံးယောက် အပျိုကြီးတွေ ပိုင်ကြတာလေ။ အကြီးဆုံးက သုံးဆယ်လောက် ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက်ကတော့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက် ကွာမယ်ထင်တာပဲ။
အကြီးဆုံးရဲ့ပုံစံက ခပ်ပိန်ပိန် သွယ်သွယ်နဲ့အရပ်မြင့်ပြီး အသားဖြူဖြူ ဆံပင်ရှည်ကို ဘီးစပတ်အမြဲပတ်ထားတယ်။ မျက်နှာကတော့ ချောတယ်ပြောရမှာပဲဗျ။
အလတ်မကကျတော့ ခါးနည်းနည်းတုတ်တယ် ခပ်ပြည့်ပြည့်ပေါ့ဗျာ အသားကတော့နည်းနည်းညိုတယ် ကျစ်ဆံမြည်းအမြဲကျစ်ထားလေးရှိပြီး စွဲမက်စရာကောင်းတာက သူ့ဖင်နဲ့နို့ကြီးတွေကအယ်နေတာပဲ။
အငယ်ဆုံး တစ်ယောက်ကတော့ ကျောင်းပြီးထားကာစ အကြီးနှစ်ယောက်က အလိုလိုက်ထားတယ် ပုံစံက ခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့။ ဆံပင်ကျောလယ်လောက်ကို အမြဲဖြောင့်ထားပြီး စကပ်ပါးပါးလေးတွေ အသားပျော့ပျော့တွေ အမြဲဝတ်တယ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ ချစ်စရာလေးပါပဲ။ သူ့ပုံစံက ဘယ်သူ့မှသိပ်ဂရုမစိုက်တဲ့ ထီမထင်ပုံစံနဲ့နေတာဆိုတော့ သိပ်မကပ်ရဲကြဘူး။ (သူတို့ရှင်းပြနေတာနဲ့ပဲ နို့ဆီဗူးဝယ်တာ လမ်းကြောင်းလွဲတော့မယ်။)
ဆိုင်ထိုင်နေတာက အလတ်မဗျ နို့ဆီဗူးလှမ်းပေးရင်းနဲ့ သူရဲ့အင်္ကျီက နည်းနည်းဟိုက်တော့ အသားညိုပေမယ့် နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးအရင်းပိုင်းကို မြင်လိုက်ရတာ တံတွေမြိုချ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး အမြန်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အရုပ်ကလေးထည့်တဲ့ ပုလင်းထဲကို နို့ဆီဗူးထဲက နို့ဆီကို အချိုရည်ပုလင်းဖုံးလေးနဲ့ထည့်ပြီး ပုလင်းဖုံးပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အိပ်ရာထဲလှဲရင်း ဈေးဆိုင်ကအလတ်မရဲ့ နို့အုံကြီးစိတ်ထဲမြင်လာတာနဲ့ လက်နဲ့ဖြေဖျောက်ပြီး အိပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာနိုးလာတော့ မျက်နှာမသစ်သေးခင် အရုပ်လေးကိုအမှတ်ရပြီးပုလင်းထဲ လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားမိခဲ့ရတယ်။ မအိပ်ခင်ကထည့်ထားတဲ့နို့ဆီတွေ တစ်စက်မှမကျန်တော့ဘူးလေ။ ပုရွက်ဆိတ်ဝင်ပြီးစားအောင်လည်း ပုလင်းက အလုံပိတ်ထားသလို ဘေးမှာပုရွတ်ဆိတ်အစအနတောင် မမြင်ရဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်စိတ် စပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ နို့ဆီကို အချိုရည်ပုလင်းဖုံးလေးထဲ ပြန်ထည့်ပြီး ပြန်ပိတ်ထားခဲ့ပါတော့တယ်။
မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျန်နေတာ ဈေးဆိုင်က အကြီးဆုံးမက တင်တင်မာ အလတ်မက ခင်ခင်မာ အငယ်ဆုံးက ယဉ်ယဉ်မာတဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကြီး ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ “ကျော်စွာ”……။
မနက်ပိုင်းကို အရုပ်လေးအိပ်ရာဘေးမှာပဲ ထားခဲ့ပြီးတော့ လက်ဖက်ရည်သောက် ဘာညာထွက်နေခဲ့ပြီး ပြန်လာတော့ ကြည့်လိုက်တာ နို့ဆီတွေမရှိတော့ပြန်ဘူး အဲဒါနဲ့ပဲ လက်တွေ့ အသုံးချကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ညနေပိုင်းရောက်တော့ ဈေးဆိုင်က အလတ်မရဲ့ နို့အုံကြီးတွေ ဖင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေမိတာနဲ့ တွေ့ရင်တော့ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး အရုပ်ကလေးကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ရင်း သွားလိုက်ပါတယ်။ကံဆိုးချင်တော့ အကြီးဆုံး မတင်တင်မာက ဈေးဆိုက်ထိုင်နေတယ်။ သူက “ဘာယူမလဲ” မေးတော့ ကြံရာမရ သွားတိုက်တံတစ်ချောင်း ဆိုပြီး ပြောလိုက်တာ သွားတိုက်တံကို ကောင်တာထဲက ထယူနေတုန်း မထူးပါဘူး စမ်းကြည့်မယ် အရင်ရှုံးတာမှတ်လို့ ဆိုပြီးတွေးရင်း အရုပ်လေးကို ပါးစပ်နားကပ်ရင်း ”သားလေး အဲဒါမင်းအမေပဲ အဖေနဲ့ မင်းအမေ အတူအိပ်ဖို့ ဒီည အိမ်ရှေ့က အဖေစောင့်နေမယ် မင့်အမေထွက်ဖို့ လုပ်ပေးအုံး” ဆိုပြီး တိုးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။
မတင်တင်မာဆီက သွားတိုက်တံယူ ပိုက်ဆံပေးပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့တစ်နေ့လုံး နေမထိထိုင်မရနဲ့ ညပဲရောက်ချင်နေမိတယ်ဗျာ။ အချိန်တွေကလည်း ကုန်တာနှေးနေသလိုပါပဲ။ ညနေပိုင်းရောက်တော့ ရေမိုးချိုး အဝတ်အစားလဲ ထမင်းစားပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမိတယ်။ အပျိုကြီး မတင်တင်မာများ တကယ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့လုပ်ရကိုင်ရမယ့် အရာတွေကို plan ချနေမိတယ် စိတ်ကူးနဲ့။
ညရှစ်နာရီလောက်ရောက်တော့ သူတို့ဆိုင်လေးသိမ်းပြီး အားလုံးအိမ်ထဲ ဝင်သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ရှေ့ကခုံလေးပေါ်ထိုင်ရင်း သူတို့ အိမ်တံခါးဘက်မျှော်ပြီး စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။
ညကိုးနာရီလောက်အရောက်မှာ မေမေက “မအိပ်သေးဘူးလား” လို့လှမ်းမေးတော့ “အိပ်မရသေးဘူး မေမေ” လို့ လှမ်းဖြေလိုက်ပြီး ဆက်ထိုင်နေပါတယ်။
တစ်ရွာလုံးလုံး လူခြေတိတ်ပြီး ငြိမ်သက်သွားတဲ့ ညဆယ်နာရီ ကျော်ကျော်လောက်မှာတော့ မတင်တင်မာတို့ အိမ်တံခါး ပွင့်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း မယောင်မလည်နဲ့ အိမ်ထဲကနေ လမ်းပေါ်ထွက်ကြည့်တော့ ကျွန်တော်ရှိရာကို တန်းပြီးလာနေတဲ့ မတင်တင်မာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော့်နားအရောက် မျက်လုံးတွေကငေးပြီး ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတာနဲ့ ခပ်တည်တည်ပဲ သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်တော့ သူဘာမှမပြောဘူး အဲဒါနဲ့ပဲ လက်ကိုဆွဲပြီး နွားတင်းကုပ်အပေါ်က နွားစာထားတဲ့ တဲလေးထဲ ခေါ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
နွားစာထားတဲ့ တဲလေးက တစ်ခြမ်းမှာ ကောက်ရိုးတွေ အပြည့်ထည့်ထားပြီး နောက်တစ်ခြမ်းက ပဲပေါ်ချိန် ပဲမှော်တွေထားဖို့ နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ ပဲပေါ်ချိန်မဟုတ်တော့ ပဲမှော်ထားတဲ့ဘက်ကို ဖျာလေးခင်းပြီး ခေါင်အုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော်ပျင်းရင်းသွားနေနေကြနေရာလေး။ တဲလေးပေါ်ရောက်တော့ မတင်တင်မာကို ဖျာလေးပေါ်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ သူစကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ် ဘာမဆိုပဲ ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့
လို့ပြောလိုက်တာ အပါးပါး…အပျိုကြီးတကယ်ပဲ သူ့အဝတ်တွေ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပိန်နေတော့ သူ့ရဲ့ သေးကျင်တဲ့ခါးလေးနဲ့မို့ အပျိုကြီးရဲ့ ဖင်သားတွေက ရှိသင့်သလောက်တော့ ရှိနေတာပါပဲ။ နို့တွေက နည်းနည်းတွဲသယောင် ရှိပေမယ့် သိပ်မကြီးဘူးဗျ။ အသားဖြူတဲ့ သူဆိုတော့ ညဘက်တောင်မှ ဖွေးဖြူနေတာပဲ။ နို့တွေက ပေါင်ခွကြားမှာတော့ အမွှေးမည်းမည်းတွေ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး လူကသာ ပိန်တာဗျ စောက်ဖုတ်ကတော့ မသေးဘူး။
ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ကြီး လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်ပါတယ် သူမငြင်းပါဘူး။ အမွှေးတွေကကြမ်းပေမယ့် စောက်ဖုတ်သားတွေက နူးညံ့တယ်ဗျ။နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး သူ့အပေါ်မှောက်ပြီး နို့တွေစို့ပါတော့တယ်။ နို့တွေကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီး အားရပါးရစို့ပေးနေတော့ မတင်တင်မာရဲ့နှုတ်ဖျားက တဟင်းဟင်းနဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလို ညည်းနေပါတယ်။ လက်ကလည်း အမွှေးကြမ်းတွေ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးကိုပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ အကွဲကြောင်းထဲ လက်ခလယ်နဲ့ ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ထားသမျှ မှတ်သားသမျှ နည်းလမ်းစုံနဲ့ ကလိနေတာ အပျိုကြီးစောက်ဖုတ်က အရည်တွေ စိမ့်လာပါတော့တယ်။ လီးကလည်း အရမ်းတောင်နေပြီမို့ လိုးဖို့ပြင်ဆင်ပြီး
လို့ပြောတော့ သူကပါးစပ်က ပြန်မဖြေပဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြပါတယ်။ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ပဲ မတင်တင်မာရဲ့ ခေါင်းအောက်က ခေါင်းအုံးကို ခါးအောက်ပြောင်းပြီး ခုလိုက်တော့ လီးနဲ့တန်းတူအဖုတ်ပြီးကစိုရွှဲဖောင်းကြွပြီး ကြိုဆိုနေတော့တာပါပဲ။ လီးကို တေ့ပြီး တစ်ရစ်ခြင်း သွင်းလိုက်တော့ စီးစီးလေးပဲ အဖုတ်ထဲ ဝင်သွားပါတယ်။ အပျိုကြီးမျက်နှာအနည်းငယ် မဲ့သွားသလိုပါပဲ။ အဲဒီနောက် ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ လိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေနဲ့ထပ်တူ မတင်တင်မာကလည်း ကော့ကော့ပေးနေလေရဲ့။ စီးပိုင်နေတဲ့ခေတ်ဟောင်းအဖုတ်ကြီးရဲ့ အရသာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း အရှိန်မြှင့်ပြီး ဆောင့်လိုက်ပါတယ်။ နွားစာတဲကြမ်းခင်းက တကျွိကျွိမြည်သံအနည်းငယ်နဲ့အတူ လီးအဝင်အထွက် ဖွတ် ဖွတ်အသံနဲ့ ဆီးခုံခြင်းရိုက်သံ တစ်ဖတ်ဖတ်က ကျွန်တော်နဲ့ မတင်တင်မာရဲ့ ကာမဇာတ်အတွက် နောက်ခံတေးဂီတပါပဲ။ သူ့ရဲ့တအီးအီးညည်းသံကလည်း ကာမရဲ့ရသကို ပိုမိုပြီး မြှင့်တင်ပေးနေသလိုနဲ့……….
တဲလေးပေါ်က မြိုင်ဆိုင်လှတဲ့ လိုးပွဲရဲ့အသံလေးတွေ။
“အစ်မ အပေါ်က လုပ်ပါလားဟင်……”
ကျွန်တော်ပြောကြည့်လိုက်တော့ သူကထုံးစံအတိုင်းခေါင်းညိတ်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အရည်တွေစိုပြီး ပြောင်လက်နေတဲ့လီးကြီးကို ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ မတင်တင်မာက လှနေရာက ထလာပါတယ်။ ခေါင်းအုံးကို ခေါင်းအောက်နေရာပြန်ပြောင်းပြီး ကျွန်တော် ပက်လက်လှန်နေပေးလိုက်တော့ မတင်တင်မာက ခွပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့လီးကို လက်နဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပွတ်လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ တေ့လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်း အဆုံးထိ ထိုင်ချလိုက်တာ တစ်ပြောက်နှစ်ပြောက် လရောင်အောက်မှာ အပျိုကြီးမျက်နှာတစ်ချက် မဲ့သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြမ်းခင်းပေါ်လက်ထောက်ပြီး အပေါ်ကနေဆောင့်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အောက်ကနေအလိုက်သင့်လေး ပင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မတင်တင်မာလည်း အရှိန်မြှင့်ပြီး ဆောင့်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သေးသွယ်တဲ့ ခန္တာကိုယ်နဲ့ သွက်သွက်လက်လက် လှုပ်ရှားပေးနေတာ အောက်ကနေဇိမ်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့လီးထိပ်က ကျဉ်လာပြီးပြီးချင်လာခဲ့သလိုပဲ မတင်တင်မားရဲ့နှုတ်ဖျားက အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ညည်းသံတွေနဲ့အတူ ခပ်မြန်မြန်ပဲဆောင့်နေပါတယ်။
“အား……အား……အစ်မ ကျွန်တော် ပြီးတော့မယ်”
သူကဘာမှပြန်မပြောပါဘူး ဆောင့်စရာရှိတာဆက်ဆောင့်နေရင်းနဲ့ လေးငါးဆယ်ချက်အရောက်မှာ အပျိုကြီးမတင်တင်မာရဲ့စောက်ခေါင်းထဲ ကျွန်တော့်ရဲ့သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ သူလည်းဆောင့်ရင်းနဲ့တွန့်တွန်လာပြီး လေးငါးချက်ထပ်ဆောင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပေါ်မှောက်ကျသွားပါတယ်။ လီးနဲ့စောက်ဖုတ်တတ်ရက်အနေအထားမှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆီးခုံက လီးမွှေးတွေကြားမှာ သူ့စောက်ဖုတ်က ကျလာတဲ့ အရည်တွေက စီးကပ်ကပ်နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ခဏနေတော့ ပျော့နေတဲ့လီးကို သူက ကြွပြီးနှုတ်လိုက်တာ ဖလွတ် ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ နောက်ထပ်အရည်တွေ ထပ်ကျလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့သူလည်း ကျွန်တော့်ဘေး လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ အဲလိုနဲ့ လုပ်လိုက်နားလိုက်နဲ့ပဲ မတင်တင်မာနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ တစ်ပေါင်ကျော်ရော လေးဘက်ထောက်ရော ဘေးတစ်စောင်းရော လေးချီလောက်ဆွဲလိုက်တာ ရွားဦးကျောင်းက အုံးမောင်းခေါက်သံကြားတော့ မနက်လေးနာရီထိုးပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီး သူပြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေးမိပြီးထိတ်လန့်သွားပါတယ်။
ဒီအတိုင်းသာ မိုးလင်းသွားရင် အပျိုကြီးကိုယူရတော့မှာလေ။ အရုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးလေးက ခေါ်နည်းပဲပြောသွားတာ ပြန်လွှတ်ဖို့မပြောခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ကြံရာမရပဲ အရုပ်လေးပါးစပ်နားကပ်ပြီး
“သားလေး မင်းအမေကို ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့”
လို့ တိုးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကံကောင်းသွားသလို အရမ်းပျော်သွားခဲ့တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ မတင်တင်မာက သူ့အဝတ်အစားတွေသူ့ဖာသာပြန်ဝတ်နေလို့ပဲ။ ပြီးတော့ သူ့ဖာသာပဲ တဲပေါ်ကနေဆင်းပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်။
အံ့ဩစရာကောင်းတာက သူစိမ်းချည်းပဲဆို အမြဲဟောင်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကခွေး အောင်မောင်းက မတင်တင်မာ သူ့နားကဖြတ်သွားတာကို ခေါင်းလေးတောင် ထောင်မကြည့်ဘူးဗျာ…….. မနက်ပိုင်း ကျွန်တော် ကိုးနာရီကျော်မှအိပ်ရာနိုးတယ်ဗျ။ မျက်နှာသစ်ရင်းတစ်ခါတည်း ရေပါချိုးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မေမေ ကြော်ထားတဲ့ထမင်းကြော်ကိုစားပြီး ဈေးဆိုင်ဘက် မတင်တင်မာရဲ့အခြေအနေကြည့်ဖို့ ထွက်လာခဲ့တယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ သူဆိုင်ထိုင်နေတာနဲ့ညားတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့အကြောင်းရှာပြီး ဘောလ်ပင်န်တစ်ချောင်းဝယ်လိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးတော့သူက “မပေးနဲ့ရတယ်” လို့ ပြောလာပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ “ညက အတော်ဆိုးတာပဲ မင်းက”လို့ပြောပြီး ငှက်ပျောသီး ဖီးကြမ်းသုံးလုံးပေးလာပါတယ်။
”အားရှိအောင်စား အိပ်ရေးပျက် အားကုန်ထားတာ” တဲ့……….. ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ကို အတော်ကြွေသွားသလိုပါပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုလည်း မသိစိတ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပေမယ့် သူမှတ်မိနေခဲ့တယ်။
ဒီညတော့ ကြိတ်ခိုက်နေတဲ့ အလတ်မ မခင်ခင်မာကိုကြံမယ်လို့ စိတ်ကူးနေမိပါတယ်။ ညအာရုံထဲမှာ သူ့ရဲ့နို့အုံကြီးကြီး ဖင်လုံးလုံးကြီးပဲမြင်နေမိခဲ့တာလေ ချချင်စိတ်ကမနည်းပြင်းထန်နေခဲ့တာ။ ညနေပိုင်းရောက်တော့ အရုပ်လေးကိုကိုင်ပြီး အဲဒီဆိုင်ဘက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ရောက်မှကြည့်လိုက်တာ အငယ်ဆုံးမ ယဉ်ယဉ်မာ ဆိုင်ထိုင်နေတာဗျ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေတာ ဈေးဝယ်သူရောက်တာတောင်မသိဘူး။
အဲဒါနဲ့ပဲ “အဟမ်း” လို့ ချောင်းဟန့်ပြီး အသံပေးလိုက်တော့ မော့တောင်မကြည့်ပဲ “ဘာယူမလဲ” တဲ့မေးလာပါတယ။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ထဲပေါ်တာ ဘလိတ်ဓား တစ်ကတ်လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက “စာဖတ်ရတာ အာရုံနောက်လိုက်တာ တစ်ရာဖိုး နှစ်ရာဖိုးနဲ့” လို့ တိုးတိုးပြောရင်း ဘလိတ်ဓားကတ်ထယူပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်က နှစ်ရာတန်တစ်ရွက်ပေးတော့ မကြည့်ပဲယူပြီး ဈေးဖိုးထည့်တဲ့သေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ စာပဲဆက်ဖတ်နေပြန်တော့တာ။ ကျွန်တော်လည်းအစက အလတ်မတွေ့မှကြံမယ်စိတ်ကူးလာခဲ့တာ မတူသလိုမတန်သလို မပြောချင်သလိုလုပ်နေတာ အမြင်ကပ်လာတာနဲ့အရုပ်လေး ပါးစပ်နားကပ်ပြီး ”သားလေး အဲဒါမင်းအမေပဲ အဖေနဲ့အမေ အတူအိပ်ရဖို့ လုပ်စမ်းအုံး” လို့ပြောပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ညပိုင်းရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ မေမေတို့အိပ်တဲ့အချိန်စောင့်နေခဲ့တယ်။ လူခြေတိတ်ချိန်အရောက်မှာ အိမ်ရှေ့ကနေထွက်စောင့်နေလိုက်တာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ယဉ်ယဉ်မာ ထွက်လာတာမြင်ရတယ်။ လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ အချစ်ဗိမ္မာန် နွားစာတဲလေးဆီခေါ်လာခဲ့တယ်။ သူရဲ့လုပ်ပုံတွေ အချိုးတွေ နေ့ခင်းတုန်းကမကျေနပ်နေတာဆိုတော့ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့
“အဝတ်အစားတွေ ချွတ်စမ်း” လို့ပြောလိုက်တော့ စကားပြန်မပြောပဲ သူ့အဝတ်တွေ တစ်ခုချင်းစီစချွတ်ပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံး ဘာမှမကျန်ပဲ ဗလာဖြစ်သွားတော့မှ ကြည့်လိုက်တာ သူ့နို့အုံဖွေးဖွေးလေးတွေမှာ နို့သီးခေါင်းကသေးသေးလေးတွေဗျ စောက်ဖုတ်ကျပြန်တော့လည်း မတင်တင်မှာလို အမွှေးတွေထူမနေပဲ အမွှေးနုနုလေးတွေ နည်းနည်းပဲရှိနေတာ။
စိတ်ထဲ သိပ်မကြည်တဲ့သူဆိုတော့ “လီးစုပ်ပေးစမ်း“ လို့ အမိန့်ဆန်ဆန်ပဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ သူကဘာမှမပြောပဲ ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကပက်လက်လှန်ပေးတော့ လီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်ပေးရှာပါတယ်။လုပ်စမရှိတဲ့သူဆိုတော့ စုပ်ဆို စုပ်ရုံပဲ သေချာမလုပ်တတ်ဘူး အဲဒါနဲ့ ”ဒစ်လေးလည်း လျှာနဲယက် ဂွေးအုတွေရောလိုပြီး ယက်စုပ်ပြီး သေချာလုပ်” လို့ပြောလိုက်တော့လည်း ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်လည်း သူ့နို့ လုံးကျစ်ကျစ်လေးကိုလှမ်းကိုင်ပြီး ဆုပ်နယ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ဂွေးအုတွေနဲ့လက်နဲ့ပွတ်ပြီး လီးကိုပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေး” လို့ပြောလိုက်တော့ သူကလုပ်ပေးပါတယ်။ စိတ်ထဲမှ ခုမှ အရမ်းကို ခံလို့ကောင်းပြီးဖီလ်းရှိနေပါတယ်။
”ပြွတ်….ပြွတ်” ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ…. “လုပ်…လုပ်…သေချာလေးစုပ်ပေး ကောင်းလာပြီ” လို့ပါးစပ်ကထုတ်ပြောလိုက်တော့ သူလည်း တတ်သမျှမှတ်သမျှနဲ့ သေချာစုပ်ပေးနေလိုက်တာ သူ့အာငွေ့နွေးနွေးလေးထဲမှာ လီးကအရမ်းတင်းမှာလာပြီး ပြီးချင်သလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အစကတော့ ပြီးရင် ပါးစပ်ကနေထုတ်ခိုင်းမလို့ပဲ ဒါပေမယ့် သူ့ပုံစံကိုစိတ်ထဲမကြည်လက်စရှိနေတာမို့ စုတ်ပေးထားရင်းနဲ့ ”ပြွတ်……ပြွတ်….. ပြွတ်…. ပြွတ်” ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အရှိန်မြှင့်ပြီး သွက်သွက်လေးစုပ်ပေးမှုနဲ့အတူ “အား….အား…..ပြီးတော့မယ်…..ပြီးတော့မယ်” လို့ကျွန်တော့်ပါးစပ်က ညည်းရင်းနဲ့ ခဏနေတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲကို ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေပန်းပြီးထည်းလိုက်ပါတော့တယ်။
”ငါ့သုတ်ရည်တွေ မြိုချလိုက် ယဉ်ယဉ်မာ” လို့ပြောလိုက်တော့ သူမြို့ချပါတယ် အနည်းငယ် သူ ပြို့ချင်သလိုဖြစ်ပေမယ့်ရအောင် မြိုချလိုက်ပါတယ်။
”ငါ့လီးကိုပြန်တောင်လာအောင်ဆွပေး ဒီခါလုပ်တော့မယ်” လို့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပြောလိုက်တော့ သူလည်းတတ်သလောက်မှတ်သလောက် လက်လေးနဲ့ဆွပေးပါတော့တယ်။ ခုမှသုတ်လွှတ်ထားတာဆိုတော့ ပျော့နေသေးတာပါပဲ ညစ်ချင်တာနဲ့ပဲ ”ပါးစပ်နဲ့ထပ်လုပ်ရင်မြန်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တော့ ယဉ်ယဉ်မာလည်း လီးကို ပြန်စုပ်ပေးပါတော့တယ်။
ဒီခါတော့သူလည်း နည်းနည်းတတ်လာပြီဆိုတော့ လီးစုပ်ပေးတာပိုပြီးအရသာရှိလာပါတယ် သင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ သူ့ရဲ့တတ်လွယ်မှုကြောင့်မကြာခင်မှာပဲ မောင်မင်းကြီးသား ခေါင်းပြန်ထောင်လာပြန်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ဖွေးဖွေးလေးကို အာသီသဖြစ်နေပြီဆိုတော့ လီးပြန်တောင်လာတာနဲ့ လုပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတော့တယ်။
”ငါ့လီးကို အပေါ်ကနေပြီး နင်စောက်ဖုတ်ထဲထည့်တော့” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်မှာပြုခဲ့တဲ့အပြုမူပြန်တွေပြီး ယဉ်ယဉ်မာကို ရင့်ရင့်သီးသီးပဲ ပြောဆို ဆက်ဆံနေလိုက်ပါတယ်။ သူကဘာမှပြမပြောပဲ ကျွန်တော့်ပေါ်တက်ခွလိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ မာနေပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်အဝလေးကိုတေ့လိုက်ပါတယ်။အသာဖိချလိုက်တော့ လက်တစ်ဆစ်လောက်ဝင်ရုံရှိသေးသူ့မျက်နှာရှုံ့မဲ့နေတာကိုဝိုးတဝါးမြင်နေရပါတယ်။
”ဆက်ပြီးသွင်းလေ” လို့ အမိန့်သံဆန်ဆန်ပြောလိုက်တော့သူ ထပ်ပြီးဖိချလိုက်ပြန်ပါတယ်။ လီးတစ်ဝက်ဝန်းကျင်အရောက်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲကတားဆီးထားတဲ့အရာ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ။ ယဉ်ယဉ်မာ ဟာ ပါကင်လေးပဲဆိုတာ။
သူ့လည်းရပ်နေပါတယ် ကျွန်တော်က “အဲဒီလောက်ပဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေ” လို့ပြောလိုက်တော့ သူက တစ်ဝက်လောက်ပဲ ညှောင့်နေပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက အရည်လေးတွေနဲ့ လီးအဝင်အထွက်ကောင်းလာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လည်း သူဖင်ကြွပြီး ပြန်အဆောင့်မှာ ကျွန်တော့်ဖင်ကို ဆတ်ကနဲမြှောက်ပြီးဆောင့်ပစ်လိုက်တာ ထုတ်ခနဲ စိတ်ထဲဖြစ်သွားပြီး သူ့နှုတ်ဖျားက “အ” ခနဲအသံထွက်လာပါတယ်။
ဆီးခုံချင်းက ထိကပ်သွားပြီးတော့ သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းထောင့်မှာ မျက်ရည်စလေးစီးကျလာတာကို လက်ခနဲမြင်လိုက်ရပါတယ်။
”ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန်လေးဆောင့်တော့” လို့ပြောလိုက်တော့ သူက စိတ်ညှို့ခံရသူလို ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ဆောင့်နေပါတော့တယ်။ အံကြတ်ထားတဲ့သူ့သွားချင်းပွတ်တိုက်သံကို အာရုံထဲကနေကြားသိလိုက်ပါတယ်။ အပျိုစင်မလေးရဲ့အဖုတ်က ကြပ်တည်းစွာနဲ့ပဲ လီးကိုဆွဲညှစ်ထားပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်နေလေရဲ့။ အချက်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်ဆောင့်ပြီးတော့ သူလည်း နေသာလာပါတော့တယ် အံကြိတ်သံအစား ကာမရသခံစားနေတဲ့အသံကိုကြားလာခဲ့ရတယ်။
ပထမဆုံးသော လီးနဲ့ထိတွေမှုမှာတင် သူ့ကိုအရသာတစ်ခုပေးစွမ်းနေပါတယ်။ အသားဖြူတော့ အရည်ထွက်တာများပြီး လီးအဝင်အထွက် အဆင်ပြေနေတော့ မသိမသာနဲ့ပဲ သူ့ဆောင့်ချက်လေးတွေစိပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်အောက်ကနေဖင်မြှောက်ပေးရင်းနဲ့စောက်ဖုတ်နံရံအတွင်းသားလေးတွေနဲ့ လီးရဲ့ပွတ်တိုက်တဲ့အရသာကို သာယာနေမိခဲ့ပါတော့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော်ခရီးဆုံးပန်းတိုင်နီးကပ်လာတာကို စိတ်ကအလိုလိုသိလာခဲ့ပါတယ်။
”ငါ…ပြီးတော့မယ် ယဉ်ယဉ်မာ သွက်သွက်လေးဆောင့်တော့” လို့ပြောလိုက်တော့ သူ့ဖင်လုံးလုံးလေးကို မြှောက်ကာ မြှောက်ကာနဲ့ အရှိန်နဲ့ပစ်ဆောင့်နေပါတော့တယ်။ တစ်ဖတ်ဖတ်နဲ့ ဆီးခုံချင်းရိုက်မိတိုင်း လီးထိပ်ကထောက်သွားတဲ့သားအိမ်နံရံ…….အလွန်ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ပြီးတော့ စိတ်တွေကိုလွှတ်ထားလိုက်တာ ကျွန်တော့်လီးထိပ်ကသုတ်ရည်တွေက ယဉ်ယဉ်မာရဲ့သားအိမ်ကိုပန်းပြီး လမ်းဆုံကိုရောက်သွားချိန် သူလည်းတွန့်ကနဲ့ တွန့်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော့်ဆီးခုံပေါ် စောက်ရည်တွေအံကျလာပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးဖင်ကိုမြှောက်ပြီး လီးကိုပြွတ်ခနဲ့ထုတ်လိုက်ချိန်မှာ ပွက်ခနဲကျလာတဲ့စောက်ရည်တွေမနည်းမနောပါပဲ…….သူလည်း ကျွန်တော်အိပ်နေတဲ့ဘေးမှာ လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို့ဖက်ထားရင်းနဲ့ သူ့နို့လေးကို လျှာလေးနဲ့ကစားနေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဆုပ်နယ်ရင်းနဲ့ နို့လုံးကျစ်ကျစ်လေးတွေရဲ့အထိအတွေ့ကိုခံယူရင်း နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် စိုင်းပြင်းနေမိပါတယ်။
နှစ်ချီ ပြီးထားတော့ နားလန်မထူလာသေးဘူးဗျ။ နောက်ထပ်တစ်ချီဆွဲပြီးပြန်လွှတ်မယ်စိတ်ကူးရင်းနဲ့ပဲ
“ယဉ်ယဉ်မာ ငါ့လီးပြန်တောင်လာအောင် နို့တွေနဲ့လီးကိုပွတ်ပေးစမ်း” လို့ပြောလိုက်တော့ သူက ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပါတယ်။
ဒီခါပြန်ထဖို့အချိန်အတော်ယူရမယ်ဆိုတာသိလို့ နို့နဲ့လီးကိုပွတ်ပေးတာဇိမ်ခံရင်း ခဏမှိန်းနေလိုက်ပါတော့တယ်။ တင်းခနဲ့ လီးရဲ့အချက်ပြသံနဲ့အတူ မှေးကနဲ့အိပ်မိမလိုဖြစ်နေရာကနေ ကျွန်တော် ပြန်လည်နိုးကြားလာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီတစ်ခါတော့ အားရပါးရနောက်ဆုံးချီဆွဲလွှတ်မယ်အတွေးနဲ့ သူ့ကို ကုန်းခိုင်းပြီး သူ့ဖင်လုံးလုံးလေးကိုင်ရင်းလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရလိုက်ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ “နင်ငါ့ကို လေးဘက်ကုန်းပေး” လို့ပြောလိုက်တော့ သူက ဖင်ဘူးတောင်လေးထောင်ပြီးကုန်းပေးရှာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပေါင်းကြားကပြူထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို တံတွေးနည်းနည်းဆွတ်လိုက်ရင်း လီးကိုသွင်းလိုက်ပါတယ်။ တစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာ သူဖင်လုံးလုံးလေးကိုင်ပြီး ကျန်နေတဲ့အပိုင်း ပစ်ဆောင့်လိုက်တာ……အင့်ကနဲ့ရှေ့ငိုက်ကျသွားပြီးတော့ ညည်းသံသဲ့သဲ့နဲ့အတူ အပျိုမလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအချီလိုးပွဲက ကာမပန်းတိုင်တစ်ခုဆီ ခရီးစနှင်လိုက်မိပါတော့တယ်…..။
နေ့ဘက်ရောက်တော့ အဲဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ယဉ်ယဉ်မာ အပြင်တောင်မထွက်ဘူး ကျွန်တော်လည်း အလတ်မအကိတ်ကြီးချောင်းရင်းနဲ့ သူ့အခြေအနေလေး ကြည့်မလို့ဟာပဲ။ မထူးပါဘူးဆိုပြီး အလတ်မ ခင်ခင်မာ ကိုပဲအာရုံစိုက်ချောင်းမြောင်းနေလိုက်တာ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ အကြီးမ မတင်တင်မာ အိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ အလတ်မထွက်လာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲက အရုပ်ကလေးပြန်ယူပြီးဆိုင်ဘက်ထွက်လာလိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်ရောက်တော့ မခင်ခင်မာက လှမ်းကြည့်ပြီး “ဘာယူမှာလဲ” လို့မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဘာဝယ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတုန်းမှာပဲ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
“နင် ဈေးလာဝယ်တယ် ငါ့အစ်မ ဈေးရောင်းတယ် ပြီးတော့ ညဘက် သူပျောက်သွားတယ် မနက်ပိုင်းမှပြန်လာတယ်။ ငါသတိမထားမိခဲ့သေးဘူး။ မနေ့က နင်ဈေးလာဝယ်တဲ့အချိန် ငါ့ညီမလေး ဈေးရောင်းတယ် ညဘက်ရောက်တော့ အမှတ်တမဲ့ပဲ ဘာမှသတိမထားသလိုနဲ့ သူထပြီး သွားတယ်။ ငါလည်းစူးစမ်းဖို့ရာအတွက် လိုက်ချောင်းတော့ နင်က ငါ့ညီမ လက်ကိုဆွဲပြီး နင်တို့အိမ်နွားစာတဲပေါ်ခေါ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အထဲရောက်တော့ နင့်အမိန့်ပေးပြောဆိုတဲ့အတိုင်း ငါ့ညီမလိုက်လုပ်နေတဲ့အထိ ငါလိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ညတုန်းက ဝင်ပြီးပြောချင်ပေမယ့် ငါ့ညီမအသက်အန္တရာယ်တွေဘာတွေစိုးရိမ်လို့မပြောခဲ့ဘူး”
သူက စကားတွေအများကြီးပြောလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း အံ့ဩသွားပြီး
“ဒါဆို အကုန်လုံး အစ်မ မြင်…….”
“ဟုတ်တယ် ငါအကုန်မြင်တယ် နင်သောင်းကျန်းလွန်းလို့အခု ငါ့ညီမ အိပ်ရာထဲကကို မထနိုင်သေးဘူး”
“ဟုတ်တယ် အခုလည်း နင်ဈေး လာဝယ်တယ် ငါကရောင်းတယ် အဲဒီတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးခင် နင့်ကို ငါရှောင်ပြေးတော့မယ် ငါ့ညီမနဲ့အစ်မလိုတော့ ဘုမသိဘမသိ မခံနိုင်ဘူး “
ပြောပြောဆိုဆိုပဲ မခင်ခင်မာ ဆိုင်ထဲက ထွက်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှလုပ်ချိန်မရလိုက်ပဲ ကြောင်ပြီး ရပ်နေမိဆဲမှာပဲ အကြီးဆုံးမ မတင်တင်မာ ဆိုင်ထဲဝင်လာပါတယ်။
“ဟေ့….ကျော်စွာ ဘာယူမလဲ ယူလေ အစ်မညီမက အိမ်သာတက်ချင်လို့ဆိုပြီး အစ်မကို ဈေးရောင်းလွှတ်လိုက်တာဟေ့ အငယ်မကတော့ နေမကောင်းဘူးထင်တယ် ခွေနေတာ”
“နေကြာစေ့ထုတ်လေးပဲ ယူမယ်အစ်မ အပျင်းပြေဝါးဖို့”
လို့ပြောလိုက်တော့ သူက နေကြာစေ့တစ်ထုတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးနဲ့အတင်းလုပ်နေလို့ လက်ထဲက ပိုက်ဆံလေးအတင်း ချထားပြီး ထွက်အလာ ”ကျော်စွာ…” လို့ သူလှမ်းခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လှည့်အကြည့်မှာတော့…. “မမနဲ့ ဘယ်တော့ တွေ့အုံးမှာလဲ “ လှမ်းမေးနေတော့ ကျွန်တော်လည်း မရတော့လည်း ရတဲ့စာပေါ့အတွေးနဲ့ “ဒီည ထွက်ခဲ့” လို့ ပြန်ဖြေပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
စိတ်ထဲမှတနုံ့နုံ့နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ ကြိတ်ပြီးချချင်နေတဲ့ အကိတ်ကြီးမခင်ခင်မာကို ကြံမရဖြစ်နေတာနဲ့ ညနေဘက် အရုပ်ကလေးကို နို့ဆီထည့်ပေးပြီး ရေမိုးချိုး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထွက်လာတော့ လက်ဖက်ရည်ထုတ်လေးဆွဲလာရင်း ကွတကွတလျှောက်လာတဲ့ ယဉ်ယဉ်မာလေးကို တွေ့တော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်လည်းမြင်ရော သူပျော်သွားပုံရတယ် ပြုံးပြပြီးတော့ “ကို” လို့ တိုးတိုးလေးခေါ်ပါတယ် ပြီးတော့ ” ကို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်” လို့ပြောပြီး ဆက်လျှောက်သွားပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိုက်တာ အရုပ်ကလေးရဲ့စွမ်းအားကို တစ်ခါသုံးပြီးရင် အသုံးခံရတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကို စွဲလန်းချစ်ခင်နေတော့တာပဲ ဆိုတာကို။ကျွန်တော်လည်း လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီးတော့ ညဘက် မတင်တင်မာ ထွက်လာမလား စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ အရုပ်ကလေးမသုံးပဲ ချိန်ထားတာဆိုတော့ သိပ်တော့စိတ်မချရဘူးလေ။ အချိန်အစောကြီးရှိသေးတယ် မတင်တင်မာထွက်လာပါတော့တယ်။
အိမ်မှာ မေမေတို့ကမအိပ်သေးတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာနဲ့ “အစ်မကလည်း အစောကြီးရှိသေးတာ အိမ်မှာမေမေတို့ မအိပ်သေးတော့ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲ”လို့ ပြောလိုက်တော့”ရတာပေါ့ “ လို့သူကပြောရင်း ဈေးဆိုင်တံခါးလေးသော့ဖွင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုပါ ဈေးဆိုင်ထဲခေါ်သွားပါတယ်။
မှော်စွမ်းအင်တွေမပါပဲတွေ့တာဆိုတော့ ဒီညတော့ သူရှက်နေသလိုပါပဲ “အစ်မအဝတ်တွေ ချွတ်ပါလား” လို့ပြောတာကို ရှက်လို့တဲ့ လုံးလုံးမချွတ်ပဲ အင်္ကျီကို လှန်ပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စကားများများမပြောချင်တာနဲ့ ဘော်လီကြီးပါ မတင်ပြီး သူ့နို့တွေကို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ကိုင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နို့တွေကို ဘယ်ညာစို့ပေးရင်းနဲ့ ပုဆိုးလှန်ပြီး သူ့လက်ထဲ လီးကိုထည့်ပေးလိုက်တော့ အပျိုးကြီးမမ မရဲတရဲနဲ့ လီးကိုပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တာ သူ့လက်ထဲမှာ လီးက တင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။
နို့တွေစို့ပေးရင်း လက်ထဲကလီးရဲ့ ပူနွေးတင်းမာတဲ့အထိအတွေ့က အပျိုကြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ စိတ်တွေ ထကြွနေပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့အဖုတ်ကြီးဆီလက်လှမ်းလိုက်တော့ အမွှေးရှည်ရှည်ကြမ်းကြမ်းတွေကို အရင်ထိတွေ့မိလိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေဆီရောက်တော့ အနည်းငယ်စိုစွတ်နေခဲ့ပါပြီ။ အချိန်သိပ်မယူချင်တာနဲ့ပဲ
သူက “အင်း…လုပ်တော့” လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ပေါင်ကြားထဲဒူးထောက်ထိုင်ချရင်း လီးကို စောက်ဖုတ်ဆီတေ့လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဝက်လောက်သွင်းကြည့်တော့ ကာမအရည်ကြည်တွေကြောင့် အဆင်ပြေပြေဝင်သွားတာနဲ့ အကုန်သွင်းလိုက်ပါတယ်။မတင်တင်မာက မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီးလီးဝင်လာတဲ့အရသာကိုခံနေပါတယ်။
သူ့ကိုစချင်တာနဲ့ ဆုံးခါနီးထိ ထုတ်ပြီး ဖွတ်ကနဲ့ အကုန်ဆောင့်သွင်းလိုက်တာ “အင့် ခနဲ” အသံမြည်သွားခဲ့ပြီး ”လန့်လိုက်တာမောင်လေးရယ် အေးဆေးလုပ်ပါ”လို့ သူပြောလာပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အထုတ်အသွင်းခဏလုပ်ပြီး ပိန်သွယ်သွယ် သူ့ခန္တာကိုယ်ကို အသာပွေ့ပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံးထိုင်ရက်အနေအထားနဲ့ သူ့ကိုအပေည်ကဆောင့်ဖို့ပြင်ပေးလိုက်တော့ သူကအလိုက်တသိပဲ ဖင်လေးကို မြှောက်ခါ မြှောက်ခါနဲ့ ဆောင့်ပါတယ်။ သူ့ဖင်သားလေးတွေ လက်နဲ့ဆုပ်နယ်ပေးရင်း နို့တွေကိုလည်း အလွတ်မပေးပဲ စို့နေလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ပါလက်ပါ သူဆောင့်နေတာကြည့်ပြီး သူအရမ်း ဖီးလာနေတာသိလိုက်ပါတယ်။
“ပြွတ်…ဖလွတ်…ဖတ်…ဖတ်” ဆိုတဲ့ကာမအသံလေးတွေက သူ့အရည်တွေပိုထွက်လာလေလေ ပိုပြီးကြားလာရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အပျိုကြီးကို ကျန်နေတဲ့ခရေပွင့်ပါကင်လေး ဖွင့်ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ ဖင်တွေဆုပ်နယ်နေတဲ့လက်ကနေ စောက်ဖုတ်ကထွက်တဲ့အရည်လေးတွေယူလိုက်ရင်း စအိုဝလေးမှာ လက်လေးနဲ့ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။
မတင်တင်မာ တွန့်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ဘာမှမပြောပါဘူး ကျွန်တော်လည်း အရည်လေးတွေထပ်ယူရင်း လက်လေးတစ်ဆစ် ထို့လိုက်တော့ သူအပေါ်ကဆောင့်နေတာ ရပ်သွားပြီး
“ဘာလုပ်နေတာလဲ မောင်လေးရယ်” လို့ပြောတော့
“မမ ဆီကနေ ပိုကောင်းတဲ့အရသာလေး ယူချင်လို့လေ”
“ဟိုလေ အစ်မ ဖင်ကိုလုပ်ချင်လို့”
“ဟာကွာ အဲဒါအညစ်အကြေးစွန့်တဲ့ဟာ ညစ်ပတ်တယ် မလုပ်ပါနဲ့”
“တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလို့ လုပ်ကြည့်ချင်တာပါ မမရဲ့”
“မင်းကလည်းကွာ စောက်ဖုတ်ကို အားရပါးရလုပ်စမ်းပါ”
“မမက လိမ္မာပါတယ်ဗျာ ဖင်ဆို ကြပ်ကြပ်လေးနဲ့လုပ်လို့ပိုကောင်းမှာ”
“မင်းနဲ့တော့ခက်နေပြီကွာ နာတယ်ဆို ဆက်မလုပ်ဘူးလား ပြော”
“စိတ်ချ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ် နာတယ်ဆို ရပ်ပေးမယ်”
“ပြီးတာပဲ ချစ်လွန်းလို့နော် ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး အဲဒီအပေါက်လုပ်ရတယ်လို့”
ပြောရင်းနဲ့ လီးမချွတ်ပဲထားတဲ့ သူ့ကို ပက်လက်လှန်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ထဲကလီးကိုချွတ်လိုက်တော့ စိုရွှဲနေတဲ့အရည်တွေကို ဖင်ပေါက်လေးထဲသုတ်ပြီး လက်လေးနဲ့အသွင်းအထုတ်စလုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ လက်လေး တံတွေးဆွတ်ပြီး ခပ်မြန်မြန်အသွင်းအထုတ်လုပ်ကြည့်တာ သူခံနိုင်လာပြီဆိုတာသိလိုက်တော့ သူ့စအိုဝလေးရော လီးကိုရော တံတွေးတွေစိုရွှဲနေအောင်ဆွတ်လိုက်ပြီး လီးထိပ် ကွမ်းသီးခေါင်းနေရာလေးအရင်ထည့်ကြည့်တော့ .
လို့သူရုန်းတာနဲ့ ခါလေးရုန်းမရအောင်ဆွဲထားပြီး လီးကို ဆက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
“အား…ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးကွာ လည်ချောင်ထဲထိ တစ်ဆို့ကြီးဖြစ်နေသလိုပဲ ပြီးတော့ အိမ်သာတက်ချင်သလို သေးပေါက်ချင်သလိုလိုနဲ့”
ကျွန်တော်လည်း ခဏရပ်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ လက်လေးနဲ့နှိုက်ပြီး ကလိပေးနေလိုက်ပါတယ် သူ့အာရုံပြောင်းထားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းအထုတ်အသွင်းလုပ်ကြည့်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်အနှိုက်ခံနေရတဲ့အရှိန်နဲ့ သူ တွေဝေနေတုန်းမှာပဲ လီးကို တစ်ဆုံးသွင်းပစ်လိုက်တော့
မတင်တင်မာက အသံအုပ်အုပ်လေးနဲ့အော်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း ခါးလေးကိုင်ပြီး အသွင်းအထုတ် ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပါတယ်။သူ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့နေတာပါပဲ နာနေလို့။ ကြောက်အားလန်းအားနဲ့ ဖင်ကိုရှုံ့ထားတဲ့မတင်တင်မာကြောင့် လီးဟာ သားရေကွင်းနဲ့စီးထားသလို ကြပ်တပ်နေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်ထဲလက်နဲ့နှိုက်လိုက် အစေ့လေးကလိလိုက်နဲ့လုပ်ပေးရင်းနဲ့ သူ့စိတ်တွေက ကာမဘက်ရောက်သွားပြီး စအုံညှစ်ထားရာကနေ ပြန်ပြန်လျှော့ပေးလာတော့ အသွင်းအထုတ်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်ရင်းနဲ့ဖင်လုပ်ပေးနေလိုက်တာ အပျိုကြီး “တဟင်းဟင်း”နဲ့ ငှက်ဖျားတက်သလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဖင်ခံရတဲ့အရသာကို သူသဘောကြသလိုရှိလာပြီး အဝင်အထွက်လည်းကောင့်လာပါတော့တယ်။လီးဝင်လာရင် စအိုကြွက်သားကိုလျှော့ပေးပြီး လီးပြန်ထွက်တော့မယ်ဆို ဆွဲပြီး ညှစ်ညှစ်ထားတာ အတော်ကိုထူးခြားတဲ့အရသာပါပဲ စောက်ဖုတ်ထက်တောင်မှ ဖင်လုပ်ရတာသဘောကျလာမိသလိုရှိလာခဲ့တယ်။
”အစ်မ ဖင်ကုန်းပေးပါလား”လို့ပြောကြည့်လိုက်တော့ သူက
စအိုထဲကလီးကို ခဏချွတ်ပေးလိုက်တော့ သူက ဒူးတုပ်ပြီး လေးဘက်ကုန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖင်ဝက ပွစိပွစိနဲ့ လီးအရသာသဘောကျလို့ ပြန်ပြီးဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲ စောက်ဖုတ်ကလည်းအရည်တွေစိုရွှဲနေခဲ့တယ်။ စောက်ဖုတ်ကအရည်တွေ လီးကိုသုတ်လိုက်ပြီး ဖင်ထဲပြန်ထည့်ပါတော့တယ်။ သူလည်း နပ်သွားပြီမို့ စအိုကြွက်သားတွေလျှော့ထားပေးတော့ ဒီတစ်ခါလုပ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ် လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကို စောက်ဖုတ်ထဲထိုးပြီး လီးကိုဖင်ထဲအသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် ပါးလွှာတဲ့အရာတစ်ခုခြားထားပြီး လီးထိပ်နဲ့ လက်ချောင်းတွေပွတ်တိုက်သွားတာက လီးကိုပိုပြီးအရသာတွေ့စေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လက်ချောင်းနဲ့လီး စည်းဝါးကိုက်လုပ်နေလိုက်တာ အပျိုကြီးစောက်ဖုတ်ကအရည်တွေထွက်ကျလာသလို ကျွန်တော်လည်းပြီးချင်လာခဲ့တာနဲ့ အရှိန်မြှင့်ဆောင့်လိုက်ပါတယ်။ဆယ်ချက်ကျော်လောက်ဆောင့်အပြီးမှာတော့ သူ့စအိုထဲကို သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါတယ် လက်ကျန်သုတ်တွေအတွက် တစ်ချက်နှစ်ချက်ထပ်ဆောင်လိုက်ပြီး သူကလည်း သုတ်ရည်တွေကို ညှစ်ယူနေခဲ့ပါတော့တယ်။
နေ့စဉ်ရက်ဆက် အလတ်မအကိတ်မကြီးကိုချောင်းတာ ဘယ်လိုမှမရဘူးဗျ ကျွန်တော့်မြင်တာနဲ့အိမ်ထဲဝင်ဝင်ပြီးလစ်သွားတာ။ သူမရှိတာနဲ့ မတင်တင်မာနဲ့ကြုံလိုက် ယဉ်ယဉ်မာနဲ့ကြုံလိုက်နဲ့ပဲ လွတ်တဲ့ငါးပြီးဆိုသလိုပဲ သူ့ပဲအာသီသဖြစ်နေမိပြီး အကြီးမနဲ့အငယ်မကိုတော့ အစားထိုးအနေနဲ့ပဲဆွဲစားနေခဲ့ရတယ်။ စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုကြံစည်ရမလဲချောင်းနေပေမယ့် ဘယ်လိုမှအလွတ်မပေးဘူးဗျ နောက်ဆုံးတော့ မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်ဖို့အကြံတစ်ခုကို ကြံစည်မိလိုက်ပါတော့တယ်။
သူ့နာမည်က “ကိုဖိုးမောင်” ကျွန်တော်နဲ့ဘေးအိမ်က လယ်သူရင်းငှါး အလုပ်ကတော့အရမ်းကြိုးစားတာပဲ အားနည်းချက်က ရုပ်ကအတော်ဆိုးပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်က နည်းနည်း ဆာသလိုဖြစ်နေခဲ့တာပဲ။ ကိုယ်မရမယ့်အတူတူ အလတ်မ ခင်ခင်မာကို အမြင်ကပ်တဲ့ပုဒ်မနဲ့အကြံတစ်ခုစဉ်းစားမိပြီး နေ့လည့်ခင်းထမင်းစားချိန်မှာ တစ်ဖက်ခြံက သူရင်းငှါး ကိုဖိုးမောင်ကို အသာလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။
“ဘာလဲကွ ကျော်စွာ ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ”
“ကိုဖိုးမောင် ကို ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခု လုပ်ပေးမလို့”
“ဘာလဲ ကွ မဟုတ်ကဟုတ်ကတော့ ချောက်မတွန်းနဲ့နော်”
“ချောက်မတွန်းပါဘူးဗျာ အတည်ပါ ကိုဖိုးမောင် အိမ်ရှေ့ဈေးဆိုင်က ခင်ခင်မာ ကိုမချချင်ဘူးလား”
“ပြန်ကြိုက်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာ ခင်ဗျားကျုပ်ခိုင်သလိုလုပ် သေချာပေါက်ကိုချရစေ့မယ်”
“ညနေပိုင်းအလုပ်သိမ်းပြီးရင် ခြံစည်းရိုးကျော်ပြီး ကျုပ်အိမ်နွားစာတဲပေါ်လာခဲ့ ရှေ့ပေါက်သူမြင်တဲ့နေရာကမလာနဲ့”
ညနေပိုင်းရောက်တော့ အရုပ်ကလေးယူပြီး ကျွန်တော် နွားစာတဲပေါ်ကနေစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ကိုဖိုးမောင်ရောက်လာတော့ အရုပ်ကလေးပြပြီး ပြောရမယ့်စကားတွေသေချာရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။
သူက အစကတော့ကြောက်နေသလိုပဲ နောက်တော့ ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့သူမသိအောင်သေချာလုပ်ခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တော့ အရုပ်ကလေးယူပြီး လာလမ်းခြံစည်းရိုးကနေပြန်သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီညက ကိုဖိုးမောင်နဲ့ကျွန်တော် မခင်ခင်မာကို စောင့်နေလိုက်ကြပါတယ်။
သူလာတော့ ကိုဖိုးမောင့်ကို အဆင်ပြေတဲ့နေရာခေါ်သွားတော့ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်တော့ ဆရာသမားက လက်လေးဆွဲပြီး ခြေထောက်လေးထော့နဲ့ထော့နဲ့ နဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ မခင်ခင်မာ ကို အရုပ်ကလေးကနေပြန်လွှတ်ခိုင်းဖို့ပြောထားတာမို့ ကျွန်တော်လည်း မနက်မှအရုပ်လေးပြန်ယူမယ်ဆိုပြီး ညတော့ ယဉ်ယဉ်မာလေးနဲ့နှပ်လိုက်အုံးမယ်အတွေးနဲ့ သူတို့အိမ်ကိုအသာဝင်ခဲ့ပြီး ယဉ်ယဉ်မာရဲ့အိပ်ခန်းဆီ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
လမ်းမှာဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေ ချောင်းကြည့်ခဲ့တော့ အကြီးမ မတင်တင်မာ ဘုရားဝတ်ပြုနေတာတွေ့ခဲ့ရပြီး လူမတွေ့တဲ့နောက်တစ်ခန်းက မခင်ခင်မာ့အခန်းဖြစ်မှာပေါ့လေ။ နောက်ဆုံးအခန်းကိုရောက်တော့ တံခါးမရှိပဲခန်းဆီးလေးပဲရှိတာမိုအသာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ယဉ်ယဉ်မာ တံခါးဘက်ကိုကျောပေးပြီးအိပ်နေတာတွေ့လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်းခြေဖော့ဝင်ခဲ့ရင်း သူ့နံဘေးအသာဝင်ပြီး ပါးစပ်ကိုအရင်ပိတ်လိုက်ပါတယ် သူလန့်သွားပြီး ဝူးဝူး အော်မယ်အလုပ် “ကိုယ်ပါ ကျော်စွာပါ” ဆိုတော့ သူငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။
ခုချိန်လောက်ဆို ကိုဖိုးမောင်တော့ ကျွန်တော်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့ အကိတ်ကြီးကိုချနေမှာပဲ ဆိုပြီး စိတ်တွေထကြွလာခဲ့ပြီး ယဉ်ယဉ်မာ့ကိုယ်လုံးလေးဖက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေအငမ်းမရစုပ်နမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ပုဆိုးလှန်ပြီး သူ့ကို လီးစုပ်ပေးခိုင်တော့ သူကစုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် တင်းမာနေတဲ့ကျွန်တော့်လီးက ယဉ်ယဉ်မာ့ရဲ့ အာငွေ့လေးနဲ့အတွေ့မှာ အကြောတွေထောင်လာတဲ့အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ ကိုဖိုးမောင်တို့အကြောင်းတွေးမိပြီး ချချင်လာတာနဲ့ သူ့ကိုလီးစုပ်တာ ရပ်ခိုင်းပြီး သူ့ထမီကို မလှန်ပစ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ လှေကြီးထိုးရိုးရိုးပဲ သူ့ကိုစလုပ်ပါတော့တယ်။
အမွှေးပါးပါးနဲ့အဖုတ်ဖွေးဖွေးလေးမြင်တော့ အကိတ်ကြီးကိုမေ့သွားပြီး အဖုတ်လေးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ပါလာခဲ့မိပါတော့တယ်။ ယဉ်ယဉ်မာရဲ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကို စီးပိုင်စွာရောက်နေတဲ့လီးဟာ စောက်ဖုတ်နံရံကြွက်သားလေးတွေရဲ့ နူးညံ့တဲ့အရသာကိုခံရင်းနဲ့ လိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပါတော့တယ်။ လီးဝင်သွားရင် လိပ်ပါသွားပြီး လီးပြန်ထွက်လာရင်တော့ အတွင်းသားလေးတွေမြင်ရသည်အထိ ပြဲအာလို့နေပါတယ်။
လိုးနေရင်းနဲ့ လက်ကအငြိမ်မနေပဲ နို့တွေကိုင်ပေးနေသလို နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းပြီးပေးနေလိုက်တာ သူအရသာတွေ့နေသလိုပါပဲ။ ဖင်လေးကိုမြှောက်မြှောက်ပြီးပေးနေလေရဲ့သူ့စောက်ဖုတ်လေးက ကာမအရည်ကြည်လေးတွေ အရမ်းထွက်လာတော့ လိုးလိုက်တိုင်းမှာအသံလေးတွေမြည်မြည်လာခဲ့တယ်။
အသံလေးတွေနဲ့ ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ရိုက်သံလေးတွေနဲ့အတူ လောကကြီးကို မေ့လျော့နေကြသည်အထိ အရသာတွေ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးနဲ့ထမ်းပြီး အားရပါးရဆောင့်ပစ်လိုက်တာ
“အား…..ကောင်းတယ် ကိုရေ…မညှာနဲ့ ဆောင့်ဆောင့်”
ကာမသံလေးတွေနဲ့ပြောရင်း နှစ်ယောက်စလုံးတက်ညီလက်ညီ လိုးနေကြပါတယ်။
ရုတ်တရက်အသံကြားလိုက်တော့ လန့်ပြီး လိုးတာကိုရပ်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မတင်တင်မာ ကို တံခါးပေါက်မှာတွေ့လိုက်ရတယ်။
ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့ဆီကလီးကိုဆွဲချွတ်ပြီး လီးတန်းလန်းနဲ့ အပျိုကြီးကိုပွေ့ဖက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေနမ်း နို့တွေနယ်ပေးလိုက်ပြီး အိပ်ရာဆီဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူကြောင်ပြီးပါလာတော့ ယဉ်ယဉ်မာ့ကို မျက်စိတစ်ဖတ်မှိတ်ပြလိုက်တာ သူလည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ ခေါင်းပြန် ညိတ်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း မတင်တင်မာ့ကို ယဉ်ယဉ်မာ့ဘေး အိပ်ရာပေါ်ဆွဲလှဲပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ထားပါတယ် သူစကားပြောချိန်မရအောင် ပြီးတော့ လက်ကနို့တွေနယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ လက်တစ်ဖက်က သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပွတ်သတ်ပြီး လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ နဲ့နဲလုပ်ပေးလိုက်တာ သူစိတ်တွေပါလာတော့ပါတယ်။စောက်ဖုတ်ကအရည်တွေရွှဲလာခဲ့တာနဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့ကို
လို့ ပြောတော့ သူကလည်း ကျွန်တော့်ဘက်ဖင်လေးကုန်းပြီး သူ့အစ်မနို့တွေစို့ပေးနေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်း မတင်တင်မာ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုး လီးနဲ့အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲလိုက်တာ အပျိုကြီးကော့တက်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ယဉ်ယဥ်မာ့ဆီက စောက်ရည်တွေစိုနေဆဲလီးကြီးနဲ့ မတင်တင်မာ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စပြီးလိုးလိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့စိတ်ကူးရတာနဲ့ ကျွန်တော့်ဘက်ဖင်လေးကုန်းထားပြီး စောက်ဖုတ်လေးပြူထွက်နေတဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့ကိုလည်း လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းလိုးပေးလိုက်ပါတယ် ညီအစ်မနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော် အောက်က မတင်တင်မာကလည်း စောက်ဖုတ်ကြီး ကော့ကော့ပေးနေသလို ယဉ်ယဉ်မာကလည်း သူ့အစ်မနို့တွေစို့ပေးရင်းနဲ့ ဖင်လေးကို နောက်ကို ပစ်ပစ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ အာရုံလွှဲ သုတ်ထိန်းပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းပေးနေလိုက်တာ ယဉ်ယဉ်မာနို့စို့တာနဲ့ ကျွန်တော်လို့တဲ့ကြားမှာ တွန့်ခနဲ့ တွန့်ခနဲဖြစ်ပြီး မတင်တင်မာ အရင်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
သူပြီးမှန်းသိတော့ ကျွန်တော်လည်း လီးကိုနှုတ်ခဲ့ပြီး ဖင်လေးကုန်းနေတဲ့ ယဉ်ယဉ်မာ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်တော့ ရှေ့ကို ကော့ကနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူ့ဖင်လေးကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်နေတော့ စောက်ဖုတ်က လေအန်တဲ့အသံလေးတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်းနဲ့ပဲ အချက်နှစ်ဆယ်လောက်အရောက်မှာ လီးထိပ်က ကျင်လာပြီးပြီးတော့မယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ အရှိန်မြှင့်ပြီးဆောင့်နေလိုက်တာ “ဖတ်ဖတ်ဖတ်” ဆိုတဲ့ ဖင်နဲ့ဆီးခုံရိုက်သံ “ဗလွီ…..ဗလွက်” ဆိုတဲ့ လေအန်သံတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော့်သုတ်ရည်တွေ ယဉ်ယဉ်မာ့စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ သူလည်းတွန့်ခနဲတွန့်ခနဲ ပြီးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ပြီးတာနဲ့ သုံးယောက်သားအိပ်ရာပေါ်မှာ အနားယူကြပါတယ် ခဏနေတော့ မတင်တင်မာထပြီး ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် အချိန်အနည်းငယ်လောက်အကြာမှာ သာပြန်လာတော့ လက်ထဲမှာ ပုဂံတစ်လုံးပါလာခဲ့ပြီး..
“အိမ်ကြက်ဥရယ် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီးရယ် ပျားရည်ရယ် ခေါက်လာခဲ့တာ အားရှိအောင်စားလိုက်”
ကျွန်တော်လည်း ယူပြီးစားလိုက်တာ အဲဒါလည်းကုန်ရော ညီလေးက အသင့်အနေအထားပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲလိုနဲ့ပဲ ညီအစ်မနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော် စခန်းသွားနေလိုက်ကြတာ မနက်လေးနာရီကျော်မှ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်။ အပြန်မှာ ဒူးတွေကို ယိုင်ချင်ချင်ဖြစ်နေခဲ့တာ သူတို့ညီအစ်မကတော့ ကာမစည်းစိမ်ယစ်မူးပြီးတော့ အိမ်ကပျောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အကိတ်မကြီးကိုတောင်သတိမထားမိကြဘူး………
“ဟဲ့ကောင်လေး ကျော်စွာ ထအုံး မနက်ကိုးနာရီထိုးနေပြီဟဲ့”
“မဝရင် နောက်မှအိပ် လောလောဆယ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံ့နေတဲ့သတင်းထူးလေး ထပြီးနားဆင်ကြည့်အုံး”
“အိမ်ရှေ့ဆိုင်က အလတ်မ ခင်ခင်မာလေ ဘေးအိမ်က သူရင်းငှါး ဖိုးမောင်နဲ့လိုက်ပြေးသွားလို့ ဟဲ”
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို… ကျွန်တော့်အရုပ်ကလေး ကိုဖိုးမောင်နောက်ပါသွားပြီ။
ကိုဖိုးမောင်တို့အတွဲကတော့ ဘယ်ဆီထိခိုးပြေးကြလဲမသိဘူး။ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ပြန်မလာကြဘူး ကျွန်တော့်မှာတော့ အပြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးညီအစ်မနှစ်ယောက်ကြားမှာ မရိုးနိုင်တဲ့ကာမရေယာဉ်ကြောမှာမျောရင်းနဲ့ ကြာလာတော့ ရည်းစားလေးအတည်တကျနဲ့ မှော်တွေမပါတဲ့အချစ်တစ်ခုတမ်းတနေမိခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်လုံးက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်နေကြတော့ ဘာမှလုပ်မရဘူးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရွားဦးကျောင်းက ခရေပင်ရိပ် သွားလိုက်တော့ မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းက ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သွားခဲ့တယ်။ အရုပ်ကလေးပေးခဲ့တဲ့ ဒွန်းစဏ္ဍားကြီးကို ဇရပ်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ရလို့လေ။ သူ့ဆီအမြန်သွားပြီး
“ဦးလေး ကျွန်တော့်ကို မှတ်မိလား”
“မှတ်မိတာပေါ့ကွာ ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေလား အရုပ်ကလေးက”
“အဲဒါပြောချင်တာပဲ ဦးလေးရေ အရုပ်ကလေးကြောင့် ကိုယ့်ကို အရမ်းစွဲလန်းသွားတဲ့သူကို ပြန်ပြီးပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဦးလေး”
“မရှိဘူးကွ သင်္ချိုင်းကိုသွားပြီး အဲဒီအရုပ်ကလေးကိုမြေမြှုပ် ပြီးရင် သူ့အတွက်ရည်စူး ကုသိုလ်လုပ် အဲဒါဆိုရင် သူတို့စိတ်တွေ ပြန်ပြေသွားကြပြီး မင်းကိုစွဲလန်းနေတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားလိုက်မယ်”
ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာခဲ့မိတယ်။ညအချိန်ရောက်ရင် စောင့်ကြိုနေမယ့် ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကိုမြင်ယောင်ရင်း ဒူးတွေတောင် အလိုလိုခွေချင်လာမိသလိုပဲဗျာ……။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 12,971
အန်တီကို လိုးချင်သေးတယ် →